Franck Bohbot wuxuu soo jeedinayaa Tokyo ka duwan oo aad u xasilan | Abuurista khadka tooska ah
Sawirro qurxoon oo qorrax dhaca ah oo ka dhacaya jidadka banaan ee Tokyo
Tokyo maahan magaalo madhan gabi ahaanba waana adag tahay in daqiiqad la helo maalinti taas oo malaayiinteeda dad ahi aysan ku badnayn oo halkan uga sii gudba halka ay magaceedu yahay magaaladan weyn. Ma ahan markii ugu horeysay ee aan diirada saarno jidadkeeda si aan kuugu soo qaadno sawirro sixir ah sidii ay ahaan jireen Waxaad ka timid Masashi Wakui.
Mar labaad waxaan ka fikiraynaa hypnotic qaar ka mid ah marinnada magaalooyinka ee waddooyinka Tokyo markay fiidkii dhacdo iyo goorta, si layaableh, waxaan u aragnaa inay faaruq yihiin. Daqiiqad farxad leh dad badan oo taasi waxay kaheleysaa nuxurka caasimada gaar ahaan Japan indhaha Franck Bohbot.
Tallaalada ka soo baxaya kamaradda Franck Bohbot runti waa dhab oo soo qaado nalkaas gaarka ah ee nabadeed ka soo baxa qaar ka mid ah jidadka magaaladan weyn. "Tokyo Murmurings" waa sawirro isdaba joog ah oo uu soo qaaday farshaxankan oo uu ku aruurinayo dukaamada, baararka iyo meelaha qarsoon ee magaaladan gaarka ah.
Bohbot wuxuu qaadaa xasilloonida daqiiqadahaas a sawiro midab weyn iyo taasi waxay muujineysaa dhinaca qariibka ah ee magaalo ee sida caadiga ah ku nool mashquulka. Naqshad dhismeedka asymmetrical-ka ah marka aysan ku noolayn dadka u jabaya laamiga iyo dhinacyadaas.
Tixdani waxay kaloo qaadataa calaamadda mustaqbalka iyo nostalgic, sida haddii aan qabsaneyno kuwa dhiirrigelinaya Blade Runner daqiiqado leh waddooyinkaas halkaas oo dhammaan noocyada dadku ay ka gudbaan ka hor kamaradda. Meloplopolis jiif ah oo lagu ogaanayo marinkeeda qarsoodiga ah waa khibrad.
Waxaad leedahay Websaydhka Franck Bohbot y uu instagram maxaa loogu ku weheli safarkiisa sawir qaadista ah isaga oo u maraya xubinta taranka iyo sida gaarka ah ee uu u arko adduunkaas inagu hareeraysan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Sawirro qurxoon oo qorrax dhaca ah oo ka dhacaya jidadka banaan ee Tokyo
Dadka madaxa u ah qolalka yar yar ee farshaxanka